सावधान ! यसरी घुम्दैछन् काठमाडौंमा अप’हर’णकारी, प्रहरीले सर्तकता अपनाउन गर्यो आग्रह – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Hot News/सावधान ! यसरी घुम्दैछन् काठमाडौंमा अप’हर’णकारी, प्रहरीले सर्तकता अपनाउन गर्यो आग्रह
काठमाडौं । लकडाउनका समयमा कम भएका अ प रा ध केही बढ्न थालेको जस्तो देखिएको छ । अझ काठमाण्डौंमा अप’हर’णको घटना देखिनुलाई प्रहरीले अनौठो रुपमा लिएको छ । आज प्राप्त एक् समाचार अनुसार, काठमाण्डौमा एक व्यक्तिको अप’हर’ण प्रयास प्रहरीले असफल पारेको छ । टोखाबाट अप’हर’णमा परेका एक व्यक्तिलाई प्रहरीले सकुशल उद्धार गरेको हो । प्रहरीका अनुसार रामबाबु साह नाम गरेका व्यक्ति अप’हर’णमा परेका थिए ।